admin – Page 265 – Shabakadda Amiirnuur
Roobabka Xilliga Dayrta ayaa sanadkan si wanaagsan ugu hooray inta badan gobollada dalka Soomaaliya waxaana lagu jiraa xilli Barwaaqo ah. Xoolaha ayaa heysta daaq wanaagsan halka dadku ay ku guda jiraan tacabka beeraha, gobollada qaar beerihii ayaa bislaasho ku dhow oo waqti aan dheerayn ayaa lafilayaa in dalagyo laga goosto […]
Maxkamadda Sare Ee Kenya oo Sharciyaysay Guushii Uu Kenyatta Ka Gaaray Doorashada.
Maxkamada sare ee dalka Kenya ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamtay dacwadii ka dhan aheyd natiijadii doorashadii ku celiska aheyd ee uu mar kale ku guuleystay Uhuru Kenyatta. Lixda garsoore ee dhageysanaysay dacwaddan ayaa isku raacay laalida guusha Kenyatta iyagoo meesha ka saaray eedaymaha la soo jeediyay. Go’aankan ayaa waxaa […]
Weerar Khasaare Sababay oo Askarta DF Loogu Geystay Sh/dhexe.
Ciidamo ka tirsan Xarakada Al-Shababa ayaa inta u dhaxaysa magaalooyinka Balcad iyo Jowhar ee Shabeelaha dhexe ku weeraray askar dowladda ka tirsan oo socdaal ku jiray, waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaarooyin kala duwan. Wararka ay heleyso Shabakadda Amiirnuur.com ayaa ku waramaya in hub culus iyo mid fudud ooda looga qaaday […]